# 1 Izixhobo zeVidiyo zeRental Database (VERD) | Iplum iyamangalisa
# 1 iZiko ledatha yokuQeshisa ngezixhobo zeVidiyo (VERD)
Asanda: 5 / 25 / 17
Iyafuna: IMac, Win, Android, iOS kunye neWebhu
Iziko ledatha yeVidiyo yeRental Equipment Rental (VERD)
Esi sisiseko sedatha esenziwe ngeFayileMaker yevidiyo / izixhobo zefilimu iinkampani eziqeshisayo. Ingalandelela inani elikhulu lezixhobo ezinjengeekhamera (ividiyo kunye nangoku), ukukhanya, iipropu, iintambo, izixhobo zesandi, kunye nezinye izixhobo ezahlukeneyo. Inemodyuli zoluhlu, irenti, i-invoyisi, ukufaka iikhowudi kwi-bar kunye nokulandelela izixhobo kuwo onke amanyathelo enkqubo.
* Sifaka iiyure ezili-10 zokwenza ulwenziwo kwixabiso lokuthenga.
Oku kulula ukuyisebenzisa kodwa i-database yeFayilemaker isebenzisa izinto ezimbini eziphambili:
Isiseko sedatha yezixhobo zeVidiyo (VERD) -Ligama ledatha elixabisekileyo leenkampani ezinoluhlu olukhulu lweekhamera (ividiyo kunye nangoku), izibane, iipropu, iintambo, izixhobo zesandi, kunye nezinye izixhobo eziqeshiswa ixesha elifutshane kunye nexesha elide. Isiseko sedatha sivumela inkampani eqeshisa izixhobo zevidiyo ukuba ibhale uluhlu, irente, i-invoyisi kunye nokulandelela izixhobo kuwo onke amanyathelo enkqubo. Ivumela ukwenza irente ngokukhawuleza, ngokungaguquguqukiyo nangokufanelekileyo.
2. Isiseko sedatha yePropathi yokuQeshisa (i-SPRD) -Oku kuvumela umbutho onenani elikhulu leepropu ezivela kwimidlalo yeqonga, iimuvi, njl.njl.ukugcina uluhlu lweempahla zalo, ukurenta okanye ukuboleka, i-invoice, ikhowudi yebar, ukungena / ukuphuma, ukwenza ingxelo, ukulandelela, ukushicilela ikhowudi ye-bar kunye nokuskena usebenzisa izikena zezinyo eziluhlaza kunye nokunye. Ngolu luhlu lweenkcukacha kunokwenzeka ukuseta indawo yokugcina impahla yeqonga kwilizwe lonke. Kutheni le nto iiseti, iipropu kunye nesinxibo sika'Peter Pan 'okanye' uFiddler eluphahleni 'zisenziwa ngaphezulu konyaka ngamnye. Gcina imali, uphinde usebenzise iipropathi zokugcina impahla, iiseti kunye nesinxibo.
Nxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya, amaxabiso kunye nedemo.
Uninzi lweenkqubo zedatha eziqeshisayo ezikhoyo zithatha inkqubo "enye elingana nayo yonke" efuna ukuba abathengi bahlengahlengise iinkqubo zabo kwisoftware. Sifumanise ukuba iintlobo ezahlukeneyo zamashishini aqeshisayo zihlala zinemodeli eyahlukileyo yeshishini.
✓ Ukubala amaxabiso kunye nerhafu
Tracking Uluhlu lweempahla
Ukungenisa / ukuthumela idatha ngaphandle
Ukuprinta ikhowudi yeBhar kunye nokuskena
✓ Uluhlu lweempahla
✓ Umboniso womfanekiso
✓ Imisonto emininzi
Iqonga lomnqamlezo-iWindows, iMac kunye neWebhu esekwe.
✓ Inani elipheleleyo lokwenza ngokwezifiso onke amanqaku
Platform Iqonga logcino lweenkcukacha: IfayileMaker Iziko ledatha elilunge kakhulu le-Mac, Win, iPhone, Android kunye neWebhu
Eminye imimandla yokusebenza enokuhluka ngokungafaniyo ibandakanya inkqubo yokuqesha iikowuti, ulawulo lweempahla, umboniso weemveliso zabathengi kunye nolungelelwaniso lweempahla.
Inkqubo yeRentals ibandakanya ukukwazi ukulawula abathengi kunye nabafowunelwa, ukwenza iikowuteshini zokuqesha ngokuzenzela ngokuzenzekelayo ii-odolo zomsebenzi wokunxibelelana kunye nee-invoice, ukuthunyelwa nge-imeyile ngokudibeneyo kweekowuti zokuqeshisa kunye nee-invoice, ulawulo lwempahla kubandakanya ukudityaniswa kwezinto ngokwamaqela ezinto ezikhoyo kunye nokudityaniswa ”Ukulandelela nokunika ingxelo.
Siya kwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zakho:
ukudalwa kwamanani okuqeshisa
Inkqubo yolawulo lwempahla kubandakanya ukubhalwa kweekhowudi
ukwahlula-hlula kunye nokuboniswa kwemifanekiso yeempahla ngaphakathi kwinkqubo
Inkqubo yokucwangciswa kwempahla
Ukulungelelaniswa kokuqala kwezi mpawu kubandakanywa kwixabiso lentengiso lenkqubo. Enye into ethandwa ngumsebenzi ifumaneka nangaliphi na ixesha ebomini benkqubo yentlawulo efanelekileyo.
• Ixesha elincinci, fumana iiyure ezili-10 zokwenza ngokwezifiso kufakwe kuthengwa kwakho.
• Fumana i-customization eyongezelelweyo kwi- $ 125.00 USD ngeyure.
• Okanye uthenge ibhanki yeeyure ezingama-50 ngeedola ezingama-5000.00, imali esongiweyo eyi- $ 1250.00!
• Masakhe i-app oyifunayo ukulawula iirente zakho!
Ixabiso lemfundo: $ 1750- sidinga iodolo kwi-.edu domain
Uqeqesho (ukuba luyafuneka): I- $ 250 kunye ne- $ 150 kumntu ngamnye owongeziweyo
Support: Umsebenzisi om-1 $ 50 / ngenyanga ($ 25 / ngenyanga yomsebenzisi ngamnye owongezelelweyo)